အပြာကားကြည့်နေတဲ့အချိန် မှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / အပြာကားကြည့်နေတဲ့အချိန် မှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ
အပြာကားကြည့်နေတဲ့အချိန် မှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ
Apann Pyay 3:33 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ယောင်းတို့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး အပြာကားထွက်တာ သိပြီးပြီလား။ခရမ်းပြာဆိုလား ဘာဆိုလား။ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆန်းတကြယ်ပေါ့ကွယ်။ တစ်ခါမှာမှ မထွက်ဖူးတာဆိုတော့။ မြန်မာတွေ မဟုတ်လည်း တခြားနိုင်ငံခြားက ထုတ်တဲ့ အပြာကား အသီးသီး ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ မလိမ်ပါနဲ့။ ဒါ လူတိုင်းကြည့်ပါတယ်။
အဲ့တော့ ကြည့်တာ မကြည့်တာ အသာထား။ စစ်တမ်းကောက်နေတာမှမဟုတ်ဘဲရယ်။
ဒါပေမယ့် ကြည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဗဟုသုတရအောင် လေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့။
(၁) ဦးနှောက်သာမက တစ်ကိုယ်လုံးက သွေးကြောလေးတွေက အနည်းငယ်ပိုပြီး ကျယ်လာပါတယ်။ (အေ့ပေါ့ စိတ်ဝင်စားနေတာကိုး )
ဒါဟာ ဦးနှောက်ကနေ ဒိုပါမင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းထွက်လာလို့ပါ။ အဲ့ဟော်မုန်းက စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်းရယ်လို့လည်း နာမည်ကြီးပြီးသားပါ။ ဆိုတော့ကာ အဲ့ဟော်မုန်းတွေ ထွက်နေတော့ ကြည့်ရတာ စိတ်ပါလက်ပါဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်တစ်ဖန်ထပ်ကြည့်ဖို့စိတ်လည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ စွဲသွားတာမဟုတ်ပေမယ့်လို့ ထပ်မကြည့်ဘဲတော့ မနေနိုင်ပါဘူး။
(၂)ပုံမှန်ချိန်ထက် နှလုံးခုန်နှုန်း နည်းနည်းပိုမြန်ပါမယ်။ များသောအားဖြင့် အပြာကားစကြည့်တဲ့သူတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းကားတွေကို ကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့လိုကြည့်တော့ အသက်ရှုတာတွေလည်း စိပ်လာတာပေါ့။ :v
(၃) ယောက်ျားလေးတွေ အနေနဲ့ အပြာကားကြည့်ရှုတာ များမယ်ဆိုရင် အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကိုယ်က pornstar တစ်ဦးလောက် ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးရယ်လို့လည်း ထင်မြင်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ကလည်း ဒီလိုဖြစ်စေဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။
(၄)အပြာကားအကြည့်များရင် မှတ်ဉာဏ်လျော့နည်းလာပါတယ်။ sex ပုံရိပ်တွေပဲ မြင်ယောင်နေချိန်များလို့ သာမန် memory recall လို့ခေါ်တဲ့ ပြန်လည်စဉ်းစားယူရတဲ့အခါမျိုးမှာ ဦးနှောက်က ထင်သလောက် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
(၅)ဦးနှောက်ရဲ့ striatum area က စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုနဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အပြာကားကြည့်နေစဉ်မှာ ဒီ area လေးက နည်းနည်းကျုံ့သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ စိတ်လက်သိပ်မကြည်သာဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ reply နှေးသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ နံပါတ် 1) မှာ ပြောတော့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတယ်ဆို။ ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတာက ကြည့်နေတုန်းမှာပါ။ ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ နံပါတ် 5) ကလို အပြင်လောကနဲ့ နည်းနည်းတော့ ဆက်ဆံရေးကျဲသွားစေလိမ့်မယ်။
ကဲ…. ဒီလောက်ဆို ဘာတွေ ဖြစ်သွားလဲတော့ သိရပြီနော်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြောင်းလဲတာ အများစုကလည်း ဦးနှောက်က စဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိလောက်ပါပြီ။ ကြည့်တာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးတော့ ပြောလို့မရဘူးလေ။ ချိန်ပြီး ကြည့်ကြပေါ့။
တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ယောကျာ်းသားတွေက မိန်းမသားတွေထက် အပြာကားကြည့်ရှုနှုန်း များတယ်ဆိုပေမယ့် မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အပြာကား ကြည့်ရှုနှုန်းကျတော့ မိန်းမသားတွေက ပိုများနေလေရဲ့။
Credit: Verte McKenzie (For Her Myanmar)
ယောင်းတို့။ မြန္မာနိုင်ငံမွာ ပထမဆုံး အပြာကားထြက္တာ သိပြီးပြီလား။ခရမ်းပြာဆိုလား ဘာဆိုလား။ လောလောဆယ်တော့ မြန္မာနိုင်ငံမွာ အဆန်းတကြယ်ပေါ့ကြယ်။ တစ္ခါမွာမွ မထြက္ဖူးတာဆိုတော့။ မြန္မာတြေ မဟုတ္လည်း တျခားနိုင်ငျံခားက ထုတ္တဲ့ အပြာကား အသီးသီး ကြည့်ဖူးကြမွာပါ။ မလိမ္ပါနဲ့။ ဒါ လူတိုင်းကြည့်ပါတယ်။
အဲ့တော့ ကြည့်တာ မကြည့်တာ အသာထား။ စစ္တမ်းကောက်နေတာမွမဟုတ္ဘဲရယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည့်နေတဲ့အခ်ိန်အတြင်းမွာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ္ထဲမွာ ဘာတြေျေပာင်းလဲနေတယ္ဆိုတာကိုတော့ ဗဟုသုတရေအာင် လေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့။
(၁) ဦးနွောက်သာမက တစ္ကိုယ္လုံးက သြေးကြောလေးတြေက အနည်းငယ္ပိုပြီး က်ယ္လာပါတယ်။ (အေ့ပေါ့ စိတ်ဝင္စားနေတာကိုး )
ဒါဟာ ဦးနွောက္ကေန ဒိုပါမင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဟ္မောုန်းထြက္လာလို့ပါ။ အဲ့ဟ္မောုန်းက စိတ္ဓာတ္တက်ကြေစပါတယ်။ ပေ်ာ်ရွှင်စေတဲ့ ဟ္မောုန်းရယ္လို့လည်း နာမည်ကြီးပြီးသားပါ။ ဆိုတော့ကာ အဲ့ဟ္မောုန်းတြေ ထြက်နေတာ့ ကြည့်ရတာ စိတ္ပါလက္ပျါဖစ္လာပါတယ်။
နောက္တစ္ဖန္ထပ်ကြည့်ဖို့စိတ္လည်ျးဖစ္လာပါတယ်။ စြဲသြားတာမဟုတ်ပေမယ့်လို့ ထပ္မကြည့်ဘဲတော့ မေနနိုင္ပါဘူး။
(၂)ပုံမွန္ခ်ိန္ထက် နွလုံးခုန်နွုန်း နည်းနည်းပျိုမန္ပါမယ်။ မ်ားသောအာျးဖင့် အျပာကားစကြည့်တဲ့သူတြေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းကားတြေကို ကြည့်ကြတယ္လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့လိုကြည့်တော့ အသက်ရွုတာတြေလည်း စိပ္လာတာပေါ့။ :v
(၃) ယောက်ားလေးတြေ အေနနဲ့ အျပာကားကြည့်ရွုတာ မ်ားမယ္ဆိုရင် အခ်စ်ရေးမွာ အဆင္မျေပျဖစ္နိုင္ပါတယ်။ ရုပ်ရွင္ထဲကလျိုဖစ္မလာတဲ့အခါ ကိုယ္က pornstar တစ်ဦးလောက် ဆြဲဆောင္မွုမရွိဘူးရယ္လို့လည်း ထင်ျမင္လာတတ်ကြပါတယ်။ ဦးနွောက္ကလည်း ဒီလျိုဖစ်စေဖို့ တြန်းအားပေးနေပါတယ်။
(၄)အျပာကားအကြည့်မ်ားရင် မွတ်ဥာဏ်လေ်ာ့နည်းလာပါတယ်။ sex ပုံရိပ်တြေပျဲမင်ယောင်နေခ်ိန္မ်ားလို့ သာမန် memory recall လို့ခေါ်တျဲ့ပန္လည္စဉ်းစားယူရတဲ့အခါမ်ိုးမွာ ဦးနွောက္က ထင်ေသလာက် မမွတ္မိတော့ပါဘူး။
(၅)ဦးနွောက်ရဲ့ striatum area က စိတ္လွုပ်ရွားတက်ကြမွုနျဲ့ပန္လည္တုံျ့ပန္မွုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အျပာကားကြည့်နေစဥ္မွာ ဒီ area လေးက နည်းနည်းက်ုံ့သြားပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ စိတ္လက်သိပ္မကြည်သာဘဲ ပတ်ဝန်းက်င္နဲ့ reply နွေးသြားတဲ့သေဘာမ်ိုျးဖစ်စေပါတယ်။ နံပါတ် 1) မွာျေပာတော့ စိတ္ဓာတ္တက်ကြတယ္ဆို။ ဟုတ္ပါတယ်။ စိတ္ဓာတ္တက်ကြတာက ကြည့်နေတုန်းမွာပါ။ ကြည့်ပြီးသြားရင်တော့ နံပါတ် 5) ကလို အျပင်လောကနဲ့ နည်းနည်းတော့ ဆက္ဆံရေးက်ဲသြားစေလိမ့်မယ်။
ကဲ…. ဒီလောက္ဆို ဘာတျြေဖစ်ြသားလဲတော့ သိရပြီနော်။ ခန္ဓာကိုယ္မွာျေပာင်းလဲတာ အမ်ားစုကလည်း ဦးနွောက္က ဈဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိထားမိလောက္ပါပြီ။ ကြည့်တာ ကောင်းတယ် မေကာင်းဘူးတော့ျေပာလို့မရဘူးလေ။ ခ်ိန်ပြီး ကြည့်ကြေပါ့။
တစ္ခုရွိသေးတယ်။ ယောက်ာ်းသားတြေက မိန်းမသားတြေထက် အပြာကားကြည့်ရှုနှုန်း မ်ားတယ္ဆိုပေမယ့် မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အပြာကား ကြည့်ရှုနှုန်းက်တော့ မိန်းမသားတြေက ပိုမ်ားနေလရဲ့။